चिसो मान्छे भनेको के हो, फिल्म हेरिसकेपछि थाहा हुन्छ – Kadar News : Oneline Digital News:
‘चिसो मान्छे’मा बाजुराको युवतीको भूमिकामा प्रस्तुत हुन कति मेहनत गर्नुपर्‍यो ?
तपाईंलाई यस्तो खालको पात्रले अपील गर्छन् या ‘लार्जर द्यान लाइफ’का चरित्रले ?
ठ्याक्कै यही भन्ने छैन । राम्रो फिल्म, राम्रो कन्टेन्ट र राम्रो क्यारेक्टर हुनुपर्‍यो । लार्जर द्यान लाइफलाई पनि नराम्रो भन्नुहुँदैन । त्यसको पनि आफ्नै खाले रमाइलो छ । हलको अनुभव दिन्छ ती फिल्मले । ती कुराको पनि म अप्रिसियट
गर्छु । म कुटुमा कुटुमा पनि नाचिरहेको हुन्छ र बुलबुल र चिसो मान्छेको गीत पनि नाचिरहेकी हुन्छु । मलाई दुइटै खालका फिल्मले आफ्नै तरिकाको खुसी दिन्छन् ।
कोभिडको तेस्रो लहरपछि ‘कबड्डी’ लगायतका नेपाली फिल्मले राम्रो कमाइ गरेका छन् । विदेशी फिल्मको दबदबा पनि बढेको छ । ‘चिसो मान्छे’ले पनि ट्रेलरमार्फत प्रशंसा पाएको छ । यी सबै आयामलाई कसरी
बलिउडका चर्चित गायक कृष्णकुमार कुननाथको कोलकातामा निधन
प्रकासित : १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार ०७:५८